လျှောက်လွှာကို install လုပ်ပါ
Hot Dog များ
ဘား - ဘူးလ်
Lloret က de မတ်
Koog တစ်ခု Zaan
စိန့်ပီတာစဘတ်သည် TBCITES ထဲသို့ထည့်ပါ (id, id_tbCountries, name, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
Ket st ။
ပျမ်းမျှ Akhtuba RP
အဆိုပါ obi အပေါ်ကျောက်
သီရိ Jayawardenepura Kotte
ကန ဦး ကြေး
ကန ဦး တစ်လုံးတည်းငွေပေးချေမှုမရှိပါ
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိ
$ 1000 အောက်မှာစျေးအသက်သာဆုံးဂိမ်း
ဒေါ်လာ ၃၀၀ အထိတန်ဖိုးနည်းသောဂိမ်းများ
$ 4000 အောက်မှာအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
ဒေါ်လာ ၅၀၀ အထိစျေးသက်သာစွာနှုတ်ယူနိုင်သည်
$ 20000 အထိအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူဂိမ်း
စီးပွားရေးကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိရယူနိုင်သည်
အသေးစားကိုဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိနှုတ်ယူနိုင်သည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အောက်တွင်စျေးသက်သာသည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း $ 75000
$ 100,000 ကျော်ဗိုလ်မှူး franchises
အမြတ်ပေးချေမှုနှင့်အတူ franchises - 1 လအတွက်
လျင်မြန်သောပေးချေမှုဂိမ်းများ - 1 လမှ3လအတွင်း
4 လမှ 1 နှစ်အထိဂိမ်း၏ပေးချေမှု
Home ဂိမ်း။ သငျသညျအိမျမှအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
၁ မှ ၃ နှစ်
4 မှ 10 နှစ်ရှိပြီ
11 မှ 20 နှစ်ရှိပြီ
ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရှိသည် - 983
USU - Universal စာရင်းကိုင်စနစ်
ကန ဦး ကြေး:0$
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်:0$
မူပိုင်ခွင့်:0$
ပြန်ဆပ်။ လအရေအတွက်: 1
အမျိုးအစား: အစီအစဉ်များ, စာရင်းကိုင်
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်အစီအစဉ်များ! ဆော့ဗ်ဝဲမရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏လုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်နေ့စဉ်ဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုခံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်း၏အားနည်းချက်များကိုဆန်းစစ်။ တိုးတက်အောင်မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားနည်းသော link သည်မည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောကြော်ငြာများကြောင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အမြတ်ကိုမဆောင်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မလုံလောက်သေးသောလုပ်ငန်း၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ သင်၏တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်မြို့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာပြီးစီးပွားရေးတွင်အများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီသောကဏ္onတွင်ဝင်ပါ။
အသေးစိတ်စာရင်းဇယားများကိုကြည့်ရန်ပရီမီယံသုံးခွင့်ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်
ကန ဦး ကြေး: 4500 $
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်: 4000 $
ပြန်ဆပ်။ လအရေအတွက်: 6
အမျိုးအစား: ကလေးများအတွက်ပညာရေးစင်တာ, ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး
Lesenka ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာသည်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်ဒဏ္talာရီပုံပြင်များဖြစ်သည့်ကလေးငယ်များအတွက်ပထမဆုံးတွေ့ရှိမှုနှင့်ဗဟုသုတဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာရှိစာသင်ခန်းများတွင်ကလေးများသည်သူတို့၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုများကိုပြသပြီးသူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Lesenka franchisee တစ် ဦး ၏စုစုပေါင်းငွေပေးချေမှုအတွက်ရရှိသောအရာ: ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာတစ်ခုစီစဉ်ပေးခြင်းအတွက်အကူအညီများ (နေရာများအတွက်လိုအပ်ချက်များ၊ ဖွင့်လှစ်ရန်အစီအစဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများစာရင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းများသက်သာခြင်း၊ ပစ္စည်းများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုပ်အဖွဲ့အစည်း) ; စင်တာအတွက်နှစ်နှစ်စီမံကိန်း၊ ၀ န်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်အကူအညီ ရှိပြီးသားဌာနများကို အခြေခံ၍ ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုအားသာချက်ကိုပေးသောထူးခြားသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ် စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ခံမှု; အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်: 10800 $
ပြန်ဆပ်။ လအရေအတွက်: 12
franchise ၏ franchise ၏ဖော်ပြချက်။ အထပ်သားပရိဘောဂမပါဘဲရုံးခန်း၊ အိမ်ခန်း၊ အိမ်၊ ဒါကာ၊ ကဖေး (သို့) စားသောက်ဆိုင်ကိုစိတ်ကူးဖို့ခက်တာကမင်းရဲ့အလားအလာ ၀ ယ်သူကတံခါးတိုင်းနောက်မှာရှိနေတယ်။ မင်းရဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ Eurocovers တွေအတွက်စျေးကွက်စွမ်းရည်ကိုတွက်ချက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခု၊ မြို့ရဲ့လူ ဦး ရေက ၃၀၀၀၀၀၊ ပျမ်းမျှမိသားစုက ၄ ယောက်ဆိုပါစို့။ စုစုပေါင်းမိသားစု ၇၅၀၀၀ အဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံးခန့်မှန်းချက်များအရတစ်နှစ်လျှင်မိသားစု ၂% သာသင်၏စစ်ဆေးမှုများဖြစ်သည့် ၁၅၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်များတွင်ပျမ်းမျှစစ်ဆေးမှုသည်နှစ်စဉ် ၁၂၃ ဒေါ်လာ၊ ပျမ်းမျှတစ်နှစ်လျှင် ၁၈၄,၃၀၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင် ၁၅,၃၆၀ ဒေါ်လာ နောက် ၂% သည်နောက်နှစ်အတွက်သင်၏ ၀ ယ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်၊ Eurocovers အတွက်ထပ်တလဲလဲဝယ်ယူမှုသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃-၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ Eurocovers Franchise Eurocovers များသည် ၁။ အထူးသီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းများကုမ္ပဏီသည်ရုရှား၌ Eurocovers များကိုသီးသန့်ဖြန့်ဖြူးသည်။
ကန ဦး ကြေး: 2500 $
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်: 30000 $
မူပိုင်ခွင့်: 225 $
ပြန်ဆပ်။ လအရေအတွက်: 18
အမျိုးအစား: ကလေးအဝတ်အထည်များ, အဝတ်အထည်စတိုး
franchisor ၏ franchise ၏ဖော်ပြချက်: ကလေးများအမှတ်တံဆိပ် LDCP (La Compagnie de Petits - နာမည်ကို“ ကလေးသူငယ်များကုမ္ပဏီ၌ဘာသာပြန်ခြင်း”) သည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ H3M SAS ၏အမှတ်တံဆိပ်ခွဲများနှင့်အညီဖြန့်ချီသောအမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်များတွင်သာရောင်းချသည်။ franchise ပုံစံသို့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် LDCP အမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိသည် (ဤအမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်များကိုပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်အာဖရိကစသည်) တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၌ Moscow ၌ Krasnodar ၌စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Petits လုပ်ငန်းအခြေအနေများ LDCP အမှတ်တံဆိပ်အဝတ်အစားများကိုအမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်များ၊ တံဆိပ်မျိုးစုံစတိုးဆိုင်များနှင့်အင်တာနက်တွင်မဖြန့်ဖြူးပါ။ စီးပွားရေးပုံစံသည် franchise တစ်ခုဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင်၏ဒီဇိုင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အယူအဆနှင့်အညီတင်းကျပ်ပြီး turnkey ကိုအခြေခံသည်။ ဆိုင်၏အနည်းဆုံးဧရိယာသည် ၆၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ ဒေသများ၌ကုမ္ပဏီသည်မြို့ (သို့မဟုတ်ဒေသ) အတွက်သီးသန့်ထောက်ပံ့သည်။ စီးပွားဖြစ်သုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပြီးရုရှားတွင်ရောင်းချနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်: 5000 $
franchise ၏ franchise ၏ဖော်ပြချက်: စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်: အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းသည်။ အလွန်သေးငယ်သောထုတ်ကုန်များသည်ရာသီအလိုက်အပြောင်းအလဲများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောလုပ်ငန်းငယ်များမှ ၀ န်ထမ်းများ ၀ န်ထမ်းများ၏ငွေဖြစ်လွယ်မှု၏တည်ထောင်မှုအရည်အချင်း၏လည်ပတ်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးလများမှစီးပွားရေးအညွှန်းများတွင်အပြုသဘောဆောင်သောဒိုင်းနမစ်များ။ စက်ရုံရဲ့ဂိုဒေါင်ဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုစနစ်အတွက်အပိုဆုစနစ်တွင်ကုန်စည်ပြတ်လပ်မှု၏စက်ရုံညွှန်းကိန်းသတိပေးချက်လောကီသားတို့သည်အ Broad analytics အတွက်ဘယ်နေရာကနေမဆို 3. အာဘော်ရဲ့ဖျော်ရည် 2. အာဘော်ရဲ့လက်ဖက်ရည်) လှော်ကိုယ်ပိုင်4.Cacao 5. ရေးသားသူရဲ့အသားညှပ်ပေါင် facility စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအပြည့်အဝစက်ရုံအလိုအလျောက် Access ကို၏ရောစပ် ဧည့်သည်များလိုင်းအခြေစိုက်စခန်း Facility တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အကျော် 40 သီးသန့်ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Barista ကျောင်းကို၏အခြေခံပေါ်မှာရှိသမျှထူထောင်မှုန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးစုစည်းန်ထမ်းသီးသန့်အတွင်းပိုင်းအမှတ်တံဆိပ်စာအုပ်၏ Wide အထူးပြု recipes
franchise ၀ ယ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ အဓိကကတော့မင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲ။ သင် franchise ဖြင့်သင်လိုအပ်သမျှကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အစုံလိုက်တစ်ခုလုံးကိုသင့်အားပေးထားပါသည်။ franchise တစ်ခုကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်မပါဘဲအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောင်းသူသည်သင့်အားစံချိန်မီငွေရှာရန်သင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးသည်။ သင်ဤလုပ်ငန်းကို ၀ ယ်ရန်မဆုံးဖြတ်မီကြာမြင့်စွာကပင်ဖရန်ချိုက်စ်ဝယ်ယူရန်နှင့်အခြားသူများကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများအားလုံးကိုခံစားရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်စွမ်းရည်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဂိမ်းတစ်ခုကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရန်သင့်တွင်ငွေမရှိလျှင်၊ franchise ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဂိမ်းရယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောကုမ္ပဏီများသည်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်အမှားအယွင်းများမှာအလွန်ရှားပါးသည်။ သငျသညျ franchise ရရှိရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, သင် franchisee, ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်၏တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူဖြစ်ကြသည်။ သင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးလူတိုင်းကြားပြီးသောအမည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောအယူအဆကိုလည်းရရှိပြီးလုံးဝကွက်လပ်ကွက်လပ်မှမည်သည့်အရာကိုမျှမတီထွင်ပါနှင့်။ ရုရှား၌ franchising သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလူကြိုက်များခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြီးတွင်ငွေလွယ်ကူသောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာမလွယ်ကူလှပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဂိမ်းဝယ်ယူတာဟာစီးပွားရေးကိုခြစ်ရာကနေတီထွင်တာထက်အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်။ လိုဂိုတစ်ခု၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးပုံစံကိုအသုံပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ လိုအပ်သောဗဟုသုတကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ဘတ်ဂျက်ရငွေ၏ပမာဏကိုလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်လုံလောက်သည်။
franchise ၀ ယ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းဝယ်ယူခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ သင့်အနေဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်၎င်းနှင့်အတူပါရှိသည့်ကိရိယာအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးကိုငှားနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် franchisees များသည်တစ်လုံးတည်းငွေပေးရသည်။ တစ်လုံးတည်းသောအလှူငွေဆိုသည်မှာငွေကြေးအရင်းအမြစ်များရရှိရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရှိပြီးသားနည်းပညာကိုသုံးခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုဖြည့်တင်းခြင်း၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော်၊ သင်သည်သင်၏ franchise ကိုအမြဲတမ်း ၀ ယ်ယူပြီးသင်၏ဒေသတွင်းတွင်မြှင့်တင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒေသတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဤအမှတ်တံဆိပ်နှင့်စီးပွားရေးပုံစံကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသေချာစွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏နယ်မြေနှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်အသေးစိတ်၊ တိကျမှုအနည်းငယ်ကိုထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များပိုမိုများပြားစွာ ၀ င်ရောက်လာပြီး၎င်းကိုကြော်ငြာစည်းရုံးရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ franchise တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေရန်သင်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ franchise သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ငှားရမ်းခြင်းပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ, franchisor နှင့် franchisee အကြားအထူးသဘောတူညီချက်ရေးဆွဲသည်။ ဤသည်မှာ franchise ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။ သင်၏ရုံးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စာချုပ်အားသင်လမ်းညွှန်ထားပြီးသင်၏လုပ်ငန်းသည်ကုန်းတက်နေမည်။
သင်စိတ်ဝင်စားသော၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သောအခွင့်အလမ်းနှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအကျိုးအပြည့်အဝရယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးကိုသင်အတိအကျဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ franchisor သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင့်ထံမှချီးမြှင့်ငွေကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကုန်ကြမ်းများရောင်းချမှုကိုစာချုပ်တွင်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၀ န်ထမ်းသင်တန်းများ၊ ဤအရာအားလုံးကိုကန်ထရိုက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာညာဘက်ကို ၀ ယ်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ သင်ရောင်းသူထံမှသင့်အားကူးစက်ခံရမည့်လူသိများသောလှည့်ကွက်များအားလုံးကိုအမြတ်ထုတ်ရန်လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုကိုရယူနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကိုတစ် ဦး ချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည်။ သူတို့ဟာလွတ်လပ်ပြီးခက်ခဲတဲ့နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်၊ အားလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်မူတည်တယ်။ အဆိုပါ franchisee သည်သူ၏ရရှိနိုင်သောအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုခြင်းအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်သည်။ သင်ကအမှတ်တံဆိပ်လည်ပတ်ခွင့်အတွက်အခွင့်အရေးသာမကစစ်တပ်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များအပြင်ဗဟုသုတ၊ နည်းပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
franchise စတိုးသည်အခြားမြို့သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်တွင်ဖွင့်လှစ်ရန်သူတို့၏ဌာနခွဲသို့အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုင်ကိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားသူများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုင်ကိုလက်ရှိပုံစံဖြင့်အမျိုးမျိုးသောကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိနေခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်က franchise တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာအထူးပုံစံဆိုင်တစ်ခုမှာသူတို့ကိုရှာဖွေသင့်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်တွင်သက်ဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်များလိုအပ်သောအရေအတွက်ရှိရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းတွင်အချက်မရှိပါ။ franchise နှင့်၎င်းတို့၏ဖော်ပြချက်များကိုအထူးဂရုပြုသင့်ပြီးစတိုးဆိုင်သည်လက်ရှိအစီအစဉ်အရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိုသူများကိုကူညီနိုင်သည်။
franchise ဆိုသည်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု (သို့) ဒြပ်ထုတစ်ခုလုံးအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀ ယ်သူသည်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြန့်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ရရှိသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဂိမ်းရောင်းချသောကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကကူညီပေးသည်။ သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုနေရာချသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်လိုအပ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုအသုံးချလိုသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ဆိုင်သို့သွားပြီးသူနှင့်အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်ဂိမ်းအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရှိပါကသင်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေများကိုတစ် ဦး ချင်းဆွေးနွေးလေ့ရှိပြီးဆိုင်ပိုင်ရှင်အားစတိုးဆိုင်အတွင်း၌သာဝယ်ယူသောအခါပြိုင်ဆိုင်မှုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ စားသုံးသူသည်၎င်းတို့ထဲမှအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ခေတ်မီစတိုးဆိုင်တစ်ခုသည်အလွန်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိရမည်။ အိမ်နီးချင်းစျေးကွက်များသို့ ၀ င်လိုသောကုမ္ပဏီအမြောက်အများသည်ဤစတိုးဆိုင်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ သင်ဤသိုလှောင်ရုံသို့သွားလျှင်သင်နှစ်သက်သောမည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုရှာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို site တစ်ခုတည်းတွင်ရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖရန်ချိုက်များအားလုံးကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုထဲသို့ပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းသည်လိုအပ်ချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များအရအသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောသိုလှောင်ရုံအတိအကျဖြစ်လာသည်။ သင်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုလိုအပ်ပါကထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆိုင်ပိုဆိုင်လေလေပိုများလေလေဖြစ်သည်။ အဆိုပြုချက်များစွာသည်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပေးသည်။
franchise ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်သင့်တော်သည့်ဒေသတစ်ခုတွင်၎င်းကိုဒေသတစ်ခုအတွင်းသို့မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ စတိုးအတွင်း၌သင်သည်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခွင့်ထူးခံစတိုးဆိုင်၏ကျေးဇူးကြောင့်ဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို။ ရှိပြီးသားနှင့်လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုလိုသောစီးပွားရေးသမားများသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြသည်။ မှန်ကန်သောဂိမ်းကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်ရှိသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုအမှတ်တံဆိပ်များ၏ဂုဏ်သတင်းသည်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်မူတည်သည်။ သဘာဝကျကျထိုကဲ့သို့သောသိုလှောင်ရုံလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်လိုအပ်သောလက်မှတ်များရှိရမည်။ ခေတ်မီသိုလှောင်ရုံသည် ၄ င်း၏ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအမြဲပေးသင့်သည်။ franchise ဆိုင်တစ်ဆိုင်သည်ယနေ့ခေတ်အခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်ချွင်းချက်မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းကိုကျေးဇူးတင်ရလျှင်၊ သင်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိရောက်စွာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဂိမ်းဆိုင်ကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားလျှင်ညှိနှိုင်းရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
franchise ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါအဓိကအချက်ကအမှားမလုပ်မိဖို့ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရမ်းအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကသူဟာငွေသားအရင်းအမြစ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်choရိယာကိုရွေးချယ်လို့ပဲ။ ဂိမ်းဆိုင်သည်မည်သူမဆိုမတူကွဲပြားသောကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ franchise များကိုဒေသဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏဤသည်ရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သောဖြစ်ပြီး, ဝယ်သူမှရောင်းချသူအခြေအနေများအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စတိုးဆိုင်အတွင်းပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် franchising တွင်ပါ ၀ င်လိုသောအလားအလာရှိသောစီးပွားရေးသမားအား၎င်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခွင့်ပြုသည်။
franchise catalog သည်လက်ရှိလူသိများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် အခြေခံ၍ လက်ရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဆိုပြုလွှာများစာရင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်ကိုဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပြီးစီးပွားရေးကိုတစ်ချိန်တည်းမှစတင်ဖွံ့ဖြိုးရန်မလိုလားသောစီးပွားရေးသမားတစ် ဦး ကအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါကတ်တလောက်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရှိဂိမ်းတိုင်းကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော catalog မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အကြိုက်ဆုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးနယ်ပယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်။ ထိုသို့သောကက်တလောက်သည်ရောင်းသူနှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးစိတ်ဝင်စားသောမေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။ ဂိမ်းလက်စွဲစာအုပ်၏မူဘောင်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းမှုများအားလုံးကိုတင်ပြသင့်ရုံသာမကဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုဖော်ပြသင့်သည်။ ဖော်ပြချက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်၊ မှန်ကန်ဆုံးနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ အကယ်၍ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကအသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားပါကသင်၏အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုစာရင်းပြုစုခြင်းမပြုဘဲမလုပ်နိုင်ပါ။
မည်သည့် franchise ကတ်တလောက်သည်အခမဲ့ (သို့) ငွေပေးချေနိုင်သည်ကိုပိုင်ရှင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, franchisors သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိုကဲ့သို့သော site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားဖြန့်ဖြူးသတင်းအချက်အလက်ကိရိယာပေါ်တွင်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်ပေးဆောင်။ franchise လက်စွဲစာအုပ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝယ်သူအသစ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဂိမ်း၏ဝယ်သူ franchisee ဟုခေါ်သည်။ စားသုံးသူအားပေးသောလက်ရှိအစီအစဉ်အရသူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရရှိသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို franchisor မှတီထွင်ခဲ့ပြီး franchisee ကိုယ်တိုင်သည်လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအရာဝတ္ထု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်းအသစ်သောအရာတစ်ခုကိုမတီထွင်လိုသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ သူတို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ဂိမ်းကိုယူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကတ်တလောက်သည်သင့်ရွေးချယ်မှုကိုကူညီရန်၊ မှန်ကန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ရန်ပုံငွေများမှအများဆုံးဝင်ငွေရရှိရန်ကူညီပေးသည်။
franchise ကတ်တလောက်ထဲမှာတစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေမှုပမာဏကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသတ်မှတ်ထားသောနှင့် franchisor ကန ဦး အဆင့်မှာ franchisee ထံမှလက်ခံရရှိသော franchise ၏တန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်း start-up ကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀% ခန့်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဂိမ်းလက်စွဲစာအုပ်၏မူဘောင်အတွင်း, သင်ပို။ ပင်အသေးစိတ်အတွက်အပြန်အလှန်၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖော်ပြရန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စီးပွားရေးစာအုပ်ဟုခေါ်သည့်အပိုဆုကြေးအဖြစ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ခံသောထိရောက်စွာရေးဆွဲထားသည့်စည်းမျဉ်းများသာဖြစ်သည်။ အလားတူစစ်ဆင်ရေးသည်ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်အသားကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟုခေါ်သည်ကသင့်အားအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်မည်သို့ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရမည်ကိုသင်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ franchise catalog ၏မူဘောင်အတွင်း၌သာဤအချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသင့်ပြီးယင်းသည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီနိုင်သည်။
franchises ၏စာရင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကက်တလောက်သည်ပိုင်ရှင်များကို site တစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့်ပိုများသောရောင်း ၀ ယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါ catalog ကောင်းစွာဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာ optimized ဖြစ်သင့်သည်။ ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်သွားလာမှုကိုလွယ်ကူစေပြီးကတ်တလောက်အသုံးပြုခြင်းကိုဖောက်သည်များအတွက်အသက်သာဆုံးနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေသည်။ သင်တစ် ဦး ကက်တလောက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, အဲဒါကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကျွမ်းကျင်စွာ compile သာ။ ကောင်း၏။ ပစ္စည်းဖော်ပြချက်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှားအယွင်းများမပေါ်ပေါက်စေရန် franchise များကိုလိုအပ်သောဂရုပြုရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များစွာသည်သူတို့၏ရောင်းသူများကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးစီးပွားရေးစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးအိမ်နီးချင်းမြို့ကြီးများနှင့်တိုင်းပြည်များတွင်လည်းဘဏ်ခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
ထိရောက်သော franchise catalog အားအသုံးပြုရန်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောအဖြေကိုရှာဖွေရန်အဆင်ပြေသောလမ်းညွှန်နှင့်တပ်ဆင်ထားရမည်။ သုံးစွဲသူတိုင်းသည်၎င်းတို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်မည်သည့်ဘာသာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းသည်ရောင်းသူမှပေးသောစည်းမျဉ်းများအရမြှင့်တင်ရမည်။ ရောင်းသူအား“ franchisor” ဟုခေါ်ပြီးသူသည်ဗဟုသုတသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုအမြတ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ သူသည် franchise ဟုခေါ်သောငွေပမာဏမှအချို့သောငွေများကိုလက်ခံရရှိသည်။ အလားတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုပေးဆောင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပေးအပ်ထားသည့်အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို franchisor ၏ကိုယ်စားလှယ်များကတီထွင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးစတင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးသည်ဝယ်ယူသူကိုယ်တိုင်သာကျခံရသည်။
franchise သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအများဆုံးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြေအနေများနှင့်ရှုထောင့်များအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည့်ထိရောက်စွာလည်ပတ်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် franchisor ၏တောင်းဆိုချက်များကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရမည်။ ထို့နောက်ထိုလုပ်ငန်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှထိရောက်စွာဖြစ်လာပြီးစီးပွားရေးကိုလိုအပ်သောဂရုစိုက်မှုပေးသည်။ အအောင်မြင်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်များသည်ဓမ္မဆရာလုပ်ငန်းများကိုလုံးလုံးလျားလျားကူးယူနိုင်ပြီးအချို့သည်သူတို့၏တိုးတက်မှုကိုပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်သကဲ့သို့တိုင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုတောင်ရောင်းသူနှင့်ဆွေးနွေးကြသည်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသောအခါ franchise ကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်ချက်များသည်စားသုံးသူအားအမြတ်ရရှိရန်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် franchise လုပ်ခြင်းသည်ရှိပြီးသား၊ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်သက်သေပြမော်ဒယ်တွင်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤစီးပွားရေးပုံစံသည်ဒေသဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာရုံးလုပ်ငန်းများကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည်မှားယွင်းစွာတည်ဆောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်စီမံကိန်း၏ဇာတိမြေတွင်ရှိသည့်နေရာနှင့်မကိုက်ညီသော်ငြားလည်းလုပ်ငန်းခွဲသည်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ။
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသင်၏မြို့ကြီးများ၏လမ်းများပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကဖေး၊ ဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်သည်။ McDonald's နှင့် KFC တို့ပင်လျှင်လူကြိုက်များသောနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ဂိမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်အရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းအားလုံးကိုစာချုပ်တွင်သတ်မှတ်သည်။ အငြင်းပွားမှုအားလုံးအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ရန်အတွက်သဘောတူညီချက်သည်နှစ်ဖက်စလုံးမှသူတို့၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်သွားလျှင်၊ အသင့်တော်ဆုံးစီးပွားရေးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဒေသတွင်းရှိလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအနေနဲ့ရုရှားမှာ McDonald's က pancakes ကိုရောင်းဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ခေတ်သစ်အခွင့်အလမ်းသည်လွတ်လပ်သောငွေကြေးအရင်းအမြစ်များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုထိရောက်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိအောင်မြင်မှုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။ ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ခြင်းထက်ပိုမိုထိရောက်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး သည်ထိုကဲ့သို့သောပုံစံကိုတီထွင်ပြီးသူ၏အတွေ့အကြုံကိုရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအတာဖြင့်မျှဝေရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သည်။ franchise လုပ်ငန်းသည်သင့်အားအသစ်သောအရာများကိုတီထွင်ရန်မဟုတ်ဘဲလက်ရှိအောင်မြင်သောရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပါကထိုသို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ထိရောက်စွာလည်ပတ်လိမ့်မည်။ အပြောင်းအလဲများကိုရောင်းချသူနှင့်သဘောတူလျှင်ဒေသဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဆိုပါကလုပ်ငန်းစီးပွားရေးသည်လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်တိုးတက်လိမ့်မည်။
franchise စီးပွားရေးကိုစတင်လိုသူများအတွက်စျေးကွက်ရှိလက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးထားသောအထူး site တစ်ခု၊ catalog သို့မဟုတ် store ကိုလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကတ်တလောက်၏အကူအညီဖြင့်သင်အသင့်တော်ဆုံးရွေးစရာကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်။ franchise လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ၊ သင်လုပ်ရမည့်အလုပ်ကိုသင်ထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အသင့်တော်ဆုံးလမ်းညွှန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ franchise လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကြောင့်လူအများတို့သည်ကန ဦး အရင်းအနှီးကိုသိသိသာသာတိုးများလာခဲ့သည်။ franchise စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးနောက်ဝင်ငွေမြင့်မားစွာရရှိရန်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာများသောအားဖြင့်အတော်လေးမြင့်မားသည်။ ဤသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား၏လူကြိုက်များမှုကိုသေချာစေသည်။ လူအများစုကနှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးပြုပြင်ထားသောပုံစံကိုငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြသည်။
သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ (သို့) ဤစာမျက်နှာ၏လိပ်စာကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းပါ
Franchise တစ်ခု ၀ ယ်ပါ
မင်းစာလုံးအမှားတစ်ခုကိုတွေ့ရင်အဲဒါကိုပြင်ဖို့အမှားပါတဲ့စာကိုမောက်စ်နဲ့ရွေးပြီး Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ